သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို messenger ကို ICQ Set
စာတိုပေးပို့ရေးဘို့ပရိုဂရမျ၏နောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်ကျော်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်စန်းကြုံနေရ: နီးပါး Skype ကို, WhatsApp ကိုနှင့်ကြေးနန်းကိုအသုံးပြုဘယ်တော့မှသူတစ်အသုံးပြုသူကိုရှာမတှေ့။ ICQ - - အတော်များများကပြီးသားပထမဦးဆုံး applications များ, ချက်ချင်းသံတမန်တဦးတည်းကိုမေ့လျော့ရန်အချိန်ကြရသည်သို့သော်ထိုသို့ "ကြီးမားသောသုံး" ကိုကောင်းတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်လာမှတိုးသင့်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ ICQ အရေအတွက်ကိုမည်သို့သိလား
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်မှာကောင်းသောအဟောင်း ICQ instant messenger ကိုနောက်တဖန်ရေပန်းစားဖြစ်လာနေသည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှု, layvchatov, ရုပ်ပြောင်, နှင့်ပိုပြီးရည်မှတ်တီထွင်မှုများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့တိုင်းခေတ်သစ်အသုံးပြုသူ ICQ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနံပါတ် (ဒီမှာ UIN ဟုခေါ်သည်) ကိုသိရန်ပိုမဟုတ်ပါဘူး။
ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင် - ဈစာအပေါ် ICQ အိုင်ကွန်တောက်
ICQ ၏ဗားရှင်းအသစ်အတွက်ကောင်းတဲ့အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်း ICQ ဖယ်ရှားပစ်ရအဟောင်းကို "greshkov" developer များအခြို့နေဆဲမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦးကောင်းကင်တမန်၏ installation ကိုဗားရှင်းအတွက်မဆိုပြဿနာများအကြောင်းကိုနားမလည်မှုစနစ်သတိပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, အသုံးပြုသူဈ ICQ icon များနှင့်ဘာမျှမကအကြောင်းလုပ်နိုင်တဲ့မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်စာတစ်စောင်မြင်သည်။
ICQ တမန်သည်နောက်တဖန်အတော်လေးလူကြိုက်များဖြစ်လာပေမယ့်, တခါတရံတွင်အသုံးပြုသူသင့်အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်လိုလားဘယ်မှာအမှုပေါင်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ICQ ၏ဗားရှင်းအသစ်ဖန်တီးသောအခါ developer များကကျူးလွန်အချို့သောချို့ယွင်းချက်မှအဓိကအားကြောင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အခြို့ရုံသစ်ကို interface နဲ့ကောင်းကင်တမန်၏အခြားတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုကြိုက်ကြဘူး။
"သင်၏ ICQ client ကိုခေတ်မမီတော့ခြင်းနှင့်မလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်" ဟုအဆိုပါစာနှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်းအကြောင်း
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအချို့ကိစ္စများတွင်, သင် run သောအခါ ICQ အသုံးပြုသူ on-screen ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုမှာတွေ့မြင်နိုင်သည် "။ secure ခေတ်မမီတော့မဟုတျဘဲသင့် client ကို ICQ" ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးများ၏အကြောင်းရင်း, တစ်ဦးတည်းသာ - ICQ ၏အဟောင်းဗားရှင်း။ ဤသတင်းစကားသည်လက်ရှိတွင်မလုံခြုံသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်သောဗားရှင်းကိုအသုံးပြုကြောင်းဖော်ပြသည်။
ရုရှား၌လူကြိုက်အများဆုံးသံတမန်တဦးတည်းမဟုတ်ခဲ့ဘာပဲဒဏ္ဍာရီကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို negate ပါဘူး - ထိုအစီအစဉ်နှင့်သူမ၏ပိုင်ထိုက်သောအောင်မြင်မှုများကြောင့်။ ဟုတ်ပါတယ်, ပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်း, ထိုသို့ချက်ချင်းနှင့်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲဖို့နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ပျက်ကွက် ICQ ICQ တစ်ဦးမျှမျှတတခေတ်မမီတော့ကုဒ်ဗိသုကာနှင့်အတူတစ်ဦးအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့တမန်ဖြစ်၏။
အခုတော့အကျွမ်းတဝင် messenger ကို ICQ အသစ်တစ်ခုလူငယ်ကြုံနေရ။ ဒါဟာအခမဲ့ရုပ်ပြောင်များနှင့်စတစ်ကာများ, layvchaty နှင့်ပိုပြီး၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုအပါအဝင်ပိုပြီး features တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ features တွေရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သတိပြုရကျိုးနပ် developer များဘေးကင်းလုံခြုံရေးအလွန်အာရုံစိုက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကအားလုံးကိုထောက်ခံ ICQ ကို SMS မက်ဆေ့ခ်ျအတွက်ယခုကြောင်းအဆိုပါမျှသာတကယ်တော့ပြီးသားလေးစားမှုပညတ်တော်မူ၏။
သမိုင်းအပြန်အလှန်စာပေးစာယူ ICQ ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အဘယ်မှာရှိ
အချိန်ကြာမြင့်စွာခေတ်သစ်လူမှုကွန်ယက်နှင့် instant messenger ကို၎င်းတို့၏ server များပေါ်မှာရှိသမျှအသုံးပြုသူစာပေးစာယူပါဝင်ပါတယ်။ ICQ လည်းဝါကြွားလို့မရပါဘူး။ ယင်းကွန်ပျူတာ၏မှတ်ဉာဏ်သို့တူးဖို့မဆိုလိုအပ်မှုနှင့်အတူစာပေးစာယူ၏သမိုင်းကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်ဒါ။ စာပေးစာယူနှင့်ဆက်စပ် ICQ သံတမန်တို့သမိုင်းသိုလှောင်နေဆဲအသုံးပြုသူရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာစာပေးစာယူတဲ့သမိုင်းစောင့်ရှောက်။
Inviz မှ ICQ စစ်ဆေးလုပ်နည်း
ယနေ့တွင် Aska ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာနေသည်နှင့်အခြားလူကြိုက်များလက်ငင်းတမန်တို့ကိုရှိသည်သောတူညီ features တွေအများအပြားရှိနေပါတယ်။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦး inviz (မမြင်ရတဲ့) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ ICQ စတင်ပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေအွန်လိုင်းကကြည့်ရှုမည်မဟုတ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ သူ Aska အလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်အဖြစ်သူတို့ကို၎င်းထိုသို့ကြည့်ရှုသည်။